Qofkii ugu horeeyey ee Soomaali ah oo Coronavirus ugu geeriyoodey Turkiga – Radio Baidoa
By Webmaster	 Last updated Mar 29, 2020
Wararka Idaacadda Radio baidoa ay ka heleyso dalka Turkiga ayaa waxaa ay sheegayaan in halkaasi xalay uu cudurka Coronavirus ugu geeriyoodey qofkii ugu horeeyey ee Soomaali ah,kaas oo Maalmahaan cudurka la xanuun sanayey.
Muwaaddinka Soomaaliyeed oo lagu Magacaabi jirey Macalin Maxamed Carfaaye ayaa maalmahaan waxaa lagu daweynayey Isbitaalka Ankara Şehir,waxaana la sheegay in xauunkiisa uu aad u darnaa ugu dambeyn uu u geeriyoodey.
Wararka ayaa waxaa ay intaasi ku darayaan in weli ay jiraan Soomaali kale oo Cudurka coronavirus la xanuunsan ee jiifa Isbitaalo ku yaalla dalka Turkiga walow aysan badneyn,waxaana xusid mudan in Turkiga ay ku sugan yihiin Soomaali farabadan.
Tirada dadka u geeriyooday xanuunka COVID-19 ee dalka Turkiga ayaa gaartay 108 ruux, halka tirada uu soo ritayna ay kor u dhaaftay 7,402.
DHAGEEYSO,,Wasiirka wasaarada warfaafinta kg oo bulshada uga digey halista covid19,
Diiwaangelinta Musharixiinta Guddoonka Baarlamaanka K/Galbeed oo Maanta bilaabaneysa